တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: Android ဖုန်းမှာသုံးတဲ့ ဥပဒေအဘိဓါန်
Android ဖုန်းမှာသုံးတဲ့ ဥပဒေအဘိဓါန်
ဒီ App လေးကို Android ဖုန်းမှာ ထည့်ပြီး သွားလေရာယူသွားရင်း ကြီးမားလှတဲ့ ဥပဒေအဘိဓါန်ကြီးကို သယ်သွားစရာမလိုတော့ပါဘူး.. ဝေါဟာရစုံလင်ပြီး ဥပဒေပညာကို အသုံးပြုနေသူ၊ လေ့လာလိုက်စားနေသူတွေ၊ တရားသူကြီး၊ ရှေ့နေ၊ ဥပဒေအရာရှိ၊ ဥပေဒကျောင်းသား တို့အတွက် သိပ်အသုံးတည့်မယ်ထင်ပါတယ်..
မောင်မောက်လေး ဆီက ယူလာတာပါ. သူ့လင့်တွေကိုပဲညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်.. Developer ကတော့ JAS ဖြစ်ပါတယ်..
Download Here ! and Here !
Posted by အောင်မျိုး at 10:27 PM